Polisy antserasera, Jeografia ao Iran · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2019 3:05 GMT
Nitatitra ny radiom-pirenena fa mikasa hanaparitaka “polisy antserasera” manerana ny firenena i Iran, nilaza ny Jeneraly Ahmadi Moghaddam fa “tsy misy ny andraso andraso” amin'ny fametrahana ny fiarovana farany an'ny Repoblika Islamika amin'ireo fahavalony tena izy sy fantany. Tsy vao izao i Moghaddam no nilaza fa hametraka polisy antserasera. Miaraka amin'ny Basiji maniry ny hibodo ny sehatra antserasera ihany koa, manomboka ho feno olona tanteraka ny aterineto Iraniana.
Na mety maminavina ny famoronana tokoa ny polisin'ny aterineto Iraniana na tsia ny tenin'i Moghaddam, dia tsy midika izany fa tsy misy lanjany. Sehatra iray izay nahazo fikarohana kely ny psikolojian'ny sivana amin'ny aterineto sy ny fanarahamaso ny aterineto ary mendrika ny hodinihana kokoa. Mety hisy fiantraikany amin'ny eritreretintsika ny fahatsapana hoe tahaka ny ahoana tokoa ny aterineto. Mety mandefa dindo izany fomba fijery momba ny aterineto izany manerana izao tontolo izao isika avy eo, mamindra ny hevitry ny “Fahalalahan'ny Aterineto” sy ny fitarihana ny politika ivelany. Tokony hanana hevitra hoe “Fahalalahana an-tserasera” ve isika raha mikatona ny hany aterineto fantatsika? Ho an'ny mpiserasera aterineto amin'ny ankapobeny ao amin'ny aterineto mihidy ao Iran, mety mahatonga ny aterineto efa atahorana na mampatahotra kokoa ny mandre fampielezan-kevitra momba ny fisamborana noho ny fampiasana Facebook, mailaka voajirika, tranonkala an-tapitrisany voasakana, Facebook lasa fialokalofan'ny mpitsikilo, ary ankehitriny polisy antserasera an'arivony naparitaka manerana ny firenena. Afaka manampy ny mpiserasera ireo fitaovana fanafenan-tsoratra na tsy itononana anarana mba hahafantarana fa voaaro izy ireo, saingy mety ho hafa tanteraka ny fahatsapan'ny mpiserasera.
Raha filazana momba ny tetikasa ho avy ny fanambarana vao haingana nataon'ny fitondrana, dia ampiasaina hananganana tahotra sy fisalasalana manodidina ny aterineto izany, raha raisina amin'ny heviny avy hatrany. Mety tsy afaka mampihorohoro ireo mpikatroka ny Hetsika Maitso ny fitondrana, saingy mety hisy fiantraikany amin'ny Iraniana an-tapitrisany maro amin'ny fomba samihafa. Farany, afaka manampy amin'ny fanivanan-tena sy ny fifehezan-tena, toy ny panopticon ny kabarin'ny fitondrana, amin'ny fampielezan-kevitra mahomby. Raha midera ny tatitra farany momba ny DDoS tao amin'ny Berkman Center aho, dia manontany tena hoe inona no hitranga raha voaaro tsara amin'ny DDoS ireo tranokalan'ny mpanohitra saingy manana mpijery vitsy satria nitsahatra tamin'ny nataony ireo mpanao didy jadona ka nanova ny paikadiny mankany amin'ny fandrahonana ara-tsaina sy ara-batana bebe kokoa. Araka ny nanamarihan'i Ethan Zuckerman, ny “fandavana tolotra (DDoS)” dia tsy ara-teknika fotsiny, fa mety ho asam-birao ihany koa. Mampiseho ny fanehoan-kevitra sy ny hetsika vao haingana nataon'ny fitondrana fa mety ho ara-tsaina ihany koa ny fandàvana tolotra.